카카오맵 အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
1.24.7 for Android
ဒေါင်းလုပ် XAPK（94.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် 카카오맵 - 지도 / 내비게이션 / 길찾기 / 위치공유
Kakao မြေပုံထောက်ခံချက်ပတျဝနျးကငျြ, ကိုရီးယား!
တွေ့ဆုံအတွက်စားသောက်ဆိုင်သင်တန်း၏အလျင်မြန်ဆုံးနည်းလမ်းတွေ, အမြန်ဆုံးလမ်းလမ်းပြ, etc
အ◼︎အဆိုပါ သင်တစ်ဦးအမြန်လမ်းမလိုအပ်အခိုက်! ✔အလျင်မြန်ဆုံးနှင့်တိကျမှန်ကန်မြေပုံ
အသီးခြားတပ်ဆင်မရှိရင်ငါ Cacao မြေပုံကနေတိုက်ရိုက်ရေကြောင်းသွားလာမှုလမ်းညွှန်မှုအရ။ ✔ Menu ကိုရှာဖွေရေးသေတ္တာများတစ်ခုမှာ, ဘတ်စ်ကားအရေအတွက်, ရပ်တန့်နှင့်အရပ်ဌာနအားလုံးသတင်းအချက်အလက်
Unmeasible ပေါင်းစည်းမှုရှာရန်ရွေ့လျား , etc
အ deuryeoyo! ယခုအချိန်တွင်လိုအပ်
စီမံခန့်ခွဲရန်ဖိုလ်ဒါနှင့်အတူအနှစ်သက်ဆုံးအပြင်, ဖိုလ်ဒါနှင့်ပုံစံများသို့သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစီမံခန့်ခွဲ On-မြေပုံ display ကို! ✔ကို Preview လမ်းမကြီးကြည့်ရန်တစ်လမ်းမြင်ကွင်းကိုရှာတွေ့ပြီးနောက်
တခါ, သင်တည်နေရာ၏တည်နေရာကိုတွေ့မြင်ဖို့ရာအရပျမွငျနိုငျမှဖိုလ်ဒါ & subscriptions ကို Up ကို shared အဖြစ်။ ✔ 3d Maps ကိုအမှန်တကယ်အရပ်ဌာနနှင့်တူ 360 Maps ကို ထိုကဲ့သို့သော360ºလှည့်, စောင်းအဖြစ်ဒါဟာအမှန်တကယ် 3D Skyview
တစ်ဦးကို 3D အမြင်ဖြင့်တစ်ဦးထက်ပိုလက်တွေ့မြေပုံများကိုဖြစ်နိုင် br>
အအားလုံးသည်တဲ့ Add-ons တွေကို
ပိတ်ဆို့နေသည်ဘယ်အရှည်, Real-time အသွားအလာသတင်းအချက်အလက်✔မြေအောက်လမ်းကြောင်းလျော့ကျစေပါတယ်ကြောင်း
✔✔သင်သည်နှောင်းပိုင်းတွင်ညဥ့် earres ပြုလျှင်, သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုဝေမျှနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ✔✔✔ Jeju အစောပိုင်းတိကျစွာဘတ်စ်ကားအနေအထား သင့်ရဲ့စကားသံကိုစောင့်ဆိုင်း, မည်သည့်အချိန်တွင်မစောင့်ဆိုင်းသင်နှင့်အတူတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲရန်ဘိုန်ဆောင်မှုများ
အ - ဖောက်သည်စင်တာ 1577 -3321
- ရေးသားသူကိုဆက်သွယ်ရန်: 1577-3754
[စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာ Access ကို] [Optional Access ကို]
bR> - သူ Mike: Voice ကိုရှာရန်
- ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်အာကာသ: Navigation: အညွှန်း, Glosbe လမ်းမကြီးဓာတ်ပုံ-Up - ဖုန်းနံပါတ်: Navigation
- ကင်မရာ: ဓာတ်ပုံ
ရိုက်ကူး - အခြား Apps ကပထိပ်တန်း: Gil လမ်းညွှန် Widgets
> * ရွေးချယ်ရေး access ကိုရရှိနိုင်သင်သည်သင်၏အန်းဒရွိုက် 6.0 ထက်ပို 6.0 ဗားရှင်းကို အသုံးပြု. နေတယ်ဆိုရင်
* သင်ကတစ်ဦးချင်းစီရွေးချယ်ခွင့်ပြုချက်ခှငျ့မပွုနိုငျ, ဒါ။ သင်ကပေးလျှင်စစ်ဆေးရန်ရှိသည်ဆိုပါကဖြစ်နိုင်လျှင် 6.0 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းက update လုပ်ဖို့အကြံပြုသည်ကျင်းပခဲ့သော terminal ကို၏ထုတ်လုပ်သူအတွက် system ကိုအဆင့်မြှင့် function ကို operating
ဘာအသစ်လဲ 카카오맵 - 지도 / 내비게이션 / 길찾기 / 위치공유 1.24.7
1. 서울, 인천 선별 진료소 혼잡도 정보 안내
2. 자동차 길찾기 추천2 경로 옵션 추가
3. 서비스 안정화 및 버그 수정
지도 어플! 카카오맵! 제대로 사용하는 12가지 방법
카카오맵 사용법_실시간 CCTV 확인방법_위치공유 _3D 스카이뷰_실시간 공사구간 확인_자전거 도로 등 편리한 기능을 알려드립니다
이제야 이게 되네~! 휴대폰으로 GPX파일 만들고 자전거 전용 네비까지!!
네이버 지도, 카카오맵 한 번에 길찾기 등 (아이폰 단축어) 시리 티맵 내비게이션, 음악 검색, 복사, 텍스트 대치
앞으로 내비게이션에 이것 안하면 데이터 요금 왕창 나올 수 있습니다!! 이 설정은 꼭 하세요!!
KakaoMap - Map / Navigation 1.24.6
KakaoMap - Map / Navigation 1.24.5